म:म: बेचेर करोडपति: ३० रुपैयाँमा मजदुरी गर्ने रामकुमारको काठमाण्डौंमा २ घर (भिडियो सहित)
गरे के हुदैन, आट गरेर गर्नुपर्छ, जुनसुकै काममा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । आज हामिले यस्तै एक म:म: ब्यापारी संगको कुराकानी लिएर आएका छौ । मःमः भनेपछी सबैको मन जान्छ । मःमः अहिले चोक चोकमा पाइन्छ । त्यस्तै कोटेश्वर चोकमा पनि भीडभाड र जाम उस्तै हुन्छ, त्यस्तै मानिसहरुको लर्को लाग्छ यही चोकमा रहेको शिखर मःमः सेन्टरमा । कुनै समय गोजीमा हजार रुपैँया लिएर काठमाण्डौं छिरेका रामकुमार यही व्यवसायबाट करोडौं कमाउन सफल भएका छन् ।
जिन्दगीमा कुल्लीको काम समेत गरेका रामकुमारले कहिल्यै हार पनि खाएनन् । करिब २० बर्ष अघि देखि थालेको यो व्यवसायबाट अहिले उनी सफलताको शिखरमा छन् तर पनि आफै विहान ४ बजे देखि रात्ति ११ बजेसम्म खट्छन् । उनै कर्मशिल रामकुमार लामा यसरी सुनाउँछन् जिन्दगीका सफलताको राज ।
* सफलता के हो? कसरी सफलता प्राप्त गर्ने? (जानी राखौ)